बजेट २०७४७५ कार्यक्रम पुरानै बजेट नयाँ - Naya Patrika
बजेट २०७४\_७५ कार्यक्रम पुरानै बजेट नयाँ
काठमाडौं | जेठ ११, २०७४
बजेट सरकारको वार्षिक वासलात मात्रै होइन, आर्थिक विकासको कुँजी र राजनीतिक प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको औजार पनि हो । मुलुकको विकासमा बजेटको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने भएको र त्यसलाई कुनै पनि बहानामा प्रभावित पार्न नहुने महसुस गर्दै नेपालको संविधान २०७२ मा बजेट ल्याउने निश्चित मिति तय गरिएको छ । सोही संवैधानिक प्रावधानअनुसार यही १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट आउँदै छ । मुलुक संघीयतामा गएको र त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्ने अहं दायित्वलाई यो बजेटले आत्मसात् गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले राजीनामा दिएर सरकार कामचलाउ भएको तथा निर्वाचन आचारसंहिता लागेको विशेष अवस्थामा यो बजेट आउँदै छ । बजेट पूरा आकारको हुने, तर नयाँ कार्यक्रम भने समावेश नगरिने सरकारले बताइसकेको छ । यस सन्दर्भमा आगामी बजेटको राजनीतिक स्थान, नीति, कार्यक्रमलगायतका विषयमा विचार विमर्श गर्न नयाँ पत्रिकाले बुधबार सरोकारवालाबीच ‘प्रि–बजेट राउन्ड टेबल’ आयोजना गर्‍यो । कार्यक्रममा उच्च सरकारी अधिकारीहरू, नीतिनिर्माताहरू, अर्थशास्त्रीहरू, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले राखेका धारणा सम्पादित रूपमा यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर बजेट ल्याउने पर्याप्त ठाउँ छ
डा. रामशरण महत, पूर्वअर्थमन्त्री
अहिले बजेट चेपुवाको स्थितिमा छ । जेठ १५ गते बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, यहीबीचमा दोस्रो चरणको निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचनअघि नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउनु आचारसंहिताविपरीत हुन्छ । अर्कातर्फ, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएको अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि सरकार कामचलाउ अवस्थामा छ भने आचारसंहिता छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ नीति र कार्यक्रम ल्याउन मिल्दैन । वर्षै दिनका लागि बजेट ल्याउने, भएका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र नयाँ कार्यक्रम केही पनि नथप्ने हाम्रो सल्लाह छ ।
हाम्रोमा सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याउने देखिएको छ । यस्तो गर्ने र उस्तो गर्ने भनेर ठूला–ठूला बजेट राख्ने, तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रोग पनि छ । बजेटमा घोषणा हुन्छ, तर कार्यान्वयनको तयारी केही पनि हुँदैन । आर्थिक नियमअनुसार खर्च गर्नुपर्ने तयारी हुँदैन । आयोजनाको अध्ययन हुनुपर्‍यो, ठेक्का लगाउनुपर्‍यो अनि पो कार्यान्वयन हुन्छ । त्यसकारण मेरो भनाइ पहिलेकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने गरी पूर्ण आकारकै बजेट ल्याउनुपर्छ । कतिपय कार्यक्रम वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता पनि भइसकेका छन् । ती कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले १२ खर्ब रुपैयाँको बजेटको चर्चा भइरहेको छ, सजिलै कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम राख्दा त्यो सीमा कट्छ । अर्कातर्फ, दुईवटा चुनाव गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि बजेट राख्नुपर्छ । त्यसकारण भइरहेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर पनि बजेट ल्याउन सकिने पर्याप्त ठाउँ छ ।
प्रत्येक बजेटका प्राथमिकता उस्तै देखिन्छन् । हामीले आर्थिक वृद्धि बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आर्थिक वृद्धि बढाउन निर्यात बढाउनुपर्छ । हामीले पूर्वाधार विकासमा गुणस्तरीय काम गर्नुपर्छ । पर्यटन विकासमा काम गर्छौं भनेर सरकारले भनेको छ, तर पूर्वाधार हेर्दा भएका पर्यटक पनि घट्ने डर छ । अत्यावश्यक काम हुनै सकेको छैन । आयोजना कार्यान्वयनमा कहाँ बाधा छ, त्यो पत्ता लगाउनुपर्छ । सरकारले चाँडै खर्च गर्न सक्ने हो भने आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । अर्को कुरा निर्यात बढाउने हो भने उत्पादन लागत घटाउनुपर्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिएर कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । आउँदो वर्ष ७.२ प्रतिशतको वृद्धिको कुरा गरिएको छ, त्यो हासिल हुन गाह्रो छ । चालू वर्षमा उच्च वृद्धि हासिल हुनुका पछाडि अघिल्लो वर्षमा शून्य आर्थिक वृद्धिका कारण हो । गत वर्ष असाध्यै न्यून भएका कारण यो वर्ष उच्च वृद्धि भएको छ । यसलाई निरन्तरता दिने भन्ने कुरा असाध्यै कठिन छ । भएका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने र मौसम पनि राम्रो भयो भने लक्ष्य हासिल हुन सक्छ । यसका लागि लगानी बढाउनुपर्छ । जलविद्युत् आयोजना थुप्रै छन्, तिनीहरूको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । सरकारले पुनर्निर्माणलाई तीव्र गतिमा लैजानुपर्छ । विगतमा जति काम गर्ने भनिएको हो, त्यो हुन सकेन । स्रोत समयमा आउँदैन । अर्थ मन्त्रालयले नियन्त्रण ग¥यो भन्ने उहाँहरूको गुनासो छ । निर्माण सामग्रीको समस्या पनि अर्को देखिने सम्भावना छ । गाउँ–गाउँमा घर बन्न थालेका छन् । तर, ढुंगा–गिट्टी निकाल्न पाएको छैन । राति–राति भने तस्करी भइरहेको छ । एकातर्फ तस्करी छ, अर्कोतर्फ अभाव । जनशक्ति उपलब्ध गराउने र समयमै स्रोत उपलब्ध गराउने हो भने काम हुन सक्छ । पूर्वाधार पुनर्निर्माण अघि बढ्दा अर्थतन्त्रले गति लिन्छ । हामी संघीय संरचनामा गइरहेका छौँ । पूर्ण रूपमा संघीय स्वरूपमा जान समय लाग्छ । त्यस हिसाबले पनि यो बजेट संक्रमणकालीन बजेट हो । पूर्वाधार पनि चाहियो, काम गर्ने संरचना पनि स्थानीय तहलाई चाहियो । स्थानीय तहलाई दिइएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि प्रशासकीय र भौतिक पूर्वाधार छैन । त्यसकारण तुरुन्त हुन सक्ने कामलाई अघि बढाउनुपर्छ । जिल्लामा रहेका संरचनालाई गाउँपालिकामा पुर्‍याउनुपर्छ । यसका लागि प्रशासकीय गुरुयोजना चाहिन्छ ।
हाम्रोमा सस्तो लोकप्रियताका लागि बजेट ल्याउने देखिएको छ । यस्तो गर्ने र उस्तो गर्ने भनेर ठूला–ठूला बजेट राख्ने, तर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रोग पनि छ ।
गाउँ र नगरलाई विभिन्न किसिमका अनुदान दिने भनिएको छ । अहिले त्यसको मापदण्ड बन्दै छ । पूर्वाधार, मानव विकास सूचकांकलगायतका सूचकलाई आधार मानेर तल्लो तहका निकायलाई बजेट दिनुपर्छ । प्रान्त बन्न त समय लाग्ला, तर आवश्यक गृहकार्य चाहिन्छ । स्थानीय तहले संवैधानिक हैसियत पाएकाले सबै कुरा मिलाएर कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । यो वर्ष पूर्ण रूपमा जान नसकिएला, तर जति सकिन्छ, त्यति कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा संक्रमणकालीन र कामचलाउ सरकारले भविष्यमा दायित्व बढाउने बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुँदैन । हाम्रो विकास लागत अहिले पनि उच्च छ । त्यसलाई घटाउनेतर्फ हामी लाग्नुपर्छ । अहिलेको संघीय संरचना महँगो व्यवस्था हो । यसले प्रशासकीय खर्च बढाउँछ । यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । प्रशासकीय खर्चलाई कम गरेर पुँजी निर्माणमा बजेट बढाउनुपर्ने अवस्था छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई चालू खर्च बढाएर बजेट दिनुपर्छ
हामीलाई पुँजीगत बजेट मात्र दिनासाथ कामले गति लिइहाल्छ भन्ने होइन । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । अर्कोतर्फ हामीलाई दिइएको बजेट विवरण राम्रो देखिए पनि त्यसको प्राप्तिका आफ्नै कठिनाइ छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका नाममा आएको बजेट विभिन्न दाता तोकेर छुट्याइएको छ । तर, ती दातामध्ये कतिपयसँग अहिलेसम्म सम्झौता हुन सकेको छैन भने कतिपय दाताले दिने भनेको बजेट छुट्याए पनि काम सुरु गरेका छैनन् । काम प्रारम्भ भएका दाताले पनि काम सकेपछि अन्तिममा मात्र यो–यो काम सम्पन्न भयो भनेर विवरण बुझाउँछन् । यसरी विवरणहरू कार्यान्वयनमा नै जान नसक्ने गरी राखिएको अवस्थामा नतिजा देखिन समय लाग्नु स्वाभाविक हो । तर, हामी थाती रहेका कामलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा धेरै अगाडि बढिसकेका छौँ ।
समझदारीमा हस्ताक्षर नभएकाहरूसँग सम्झौताको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जसले आफैँ काम गर्ने गरी सम्झौता गरेका छन्, उनीहरू डिपिआर सम्पन्न गर्ने चरणमा छन् । सरकारी भवनहरूको डिजाइन–ड्रइङ बनाउने काम सम्पन्न हुने क्रममा छ । हामीलाई पुँजीगत बजेट मात्र दिनासाथ कामले गति लिइहाल्छ भन्ने होइन । त्यसका लागि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको पक्ष सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । अर्कोतर्फ हामीलाई दिइएको बजेट विवरण राम्रो देखिए पनि त्यसको प्राप्तिका आफ्नै कठिनाइ छन् । एउटा नया“ कामका लागि ५ करोड रुपैया“ चाहियो भने कैयौँपटक अर्थ मन्त्रालय चाहर्नुपर्छ र अन्त्यमा १ करोड पाइन्छ । यस अवस्थामा प्राधिकरणलाई छुट्याइएको बजेट राम्रो बनाउन नसक्नु पनि पुनर्निर्माणको प्रगतिका विभिन्न बाधकमध्ये एक हो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि हामीले १ सय ६१ अर्ब रुपैया“ मागेका छौँ, त्यसमध्ये १ सय ४९ अर्ब प्राप्त हुने आश्वासन पाएका छौँ । यसपटक कि हामीलाई पुनर्निर्माण कोष दिनुपर्छ वा चालू खर्च बढाएर दिनुपर्छ भन्ने समझदारी कायम भएको छ । यस अवस्थामा प्राधिकरणले सहज रूपमा खर्च गर्न सक्छ । यो वर्ष चालू खर्च बढेर आउनुपर्छ र यसमा नेपाल सरकारले पनि धेरै योगदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो माग सम्बोधन भयो भने हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ ।
पुनर्निर्माणको सन्दर्भमा अन्य मुलुकको अभ्यास हेर्दा हाम्रोमा विभिन्न कारणले एक वर्ष ढिलाइ भएको छ । यसमा चाहे प्राधिकरणको गठन होस् या राजनीतिक कारण नै किन नहोस् । पछिल्लो तीन सातायता सरकारी कर्मचारीले नियमित रूपमा काम गर्न पाएका छैनन् । अहिले दोस्रो किस्ताका लागि ४२ हजार निवेदन प्राप्त भएका छन् । तर, चुनाव र मतगणनाका कारण कर्मचारीले काम गर्न नपाएपछि १५ अर्ब रुपैया“ विभिन्न जिल्लामा थुप्रिएर बसेको छ । तर, अब यो कामले गति लिन्छ ।
सरकारले लगानीका लागि विभिन्न वातावरण बनाइरहँदा यहाँ उद्योग खोल्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । मेरो आफ्नै सिमेन्ट उद्योग छ र त्यसको अहिले क्षमता दोब्बरभन्दा बढी गरिएको छ । यहीँ खानी भएका कारण शतप्रतिशत लगानी स्वदेशी वस्तुमै गर्न पाइएको छ ।
प्राधिकरणले १ लाख १४ हजार घरमा इन्जिनियर पठाएर गरेको अध्ययनअनुसार ३४ प्रतिशत घर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । घर बन्ने काम अगाडि बढेको छ । चुनावपछि यसले अझै गति लिने अपेक्षा छ । पुनर्निर्माणमा सबैभन्दा राम्रो प्रगति विद्यालयको पुनर्निर्माणमा देखिएको छ । अहिले करिब ४ हजार विद्यालय पुनर्निर्माणको काम विभिन्न चरणमा पुगेको छ । यसको मतलव अहिले ५० हजार विद्यालय पुनर्निर्माणको विभिन्न चरणमा रहेर काम भइरहेको छ । सरकारी भवनहरू पुनर्निर्माणको काम पनि जारी छ । अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या सम्पदा पुनर्निर्माणमा देखिएको छ । सम्पदाको मौलिकता नगुमाई बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि हामीकहाँ दक्ष जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ । सिंहदरबार बनाउन डिजाइनर खोज्दा बजारमा दक्ष जनशक्ति नै पाउन गाह्रो छ । त्यसकारण प्राधिकरणले निजी–सार्वजनिक साझेदारी मोडलमा जाने र जनता आफैँले बनाउने भए सरकारले त्यसका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराउने मोडलमा गएका छौँ । त्यसक्रममा सरकारी मोडल र मापदण्ड भने लागू हुनुपर्छ । अहिले सानासाना हेल्थपोस्ट पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढे पनि ठूला अस्पताल पुनर्निर्माणको कामले गति लिन सकेको छैन ।
प्राधिकरणलाई हाम्रै कार्यविधिले बाँधेका कारण पनि प्रगति हुन सकेको थिएन । ती कार्यविधिलाई हामीले संशोधन गरेका छौँ । अब स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय स्तरमा हुने पुनर्निर्माणका धेरै काम स्थानीय तहसँगको सहकार्यमै अगाडि बढ्नेछन् । टेन्डरविना नै अगाडि बढाउन सकिने साना खानेपानी आयोजना, सामुदायिक भवनजस्ता निर्माणको काम स्थानीय तहबाटै हुनेछ । घरको किस्ताबन्दी बाँड्ने सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहसँग सहकार्य हुनेछ । निर्वाचन सकिएका स्थानीय तहमा आगामी साताबाटै निर्वाचित जनप्रतिनिधिसमक्ष अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाएर यसको सुरुवात गर्ने योजना छ । अहिले खटिएका इन्जिनियरलाई पनि गाउँपालिका र नगरपालिकामा खटाएपछि स्वामित्व लिएर काम अगाडि बढ्दा प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ । साना आयोजनाको काम स्थानीय तहले जिम्मा लियो भने ठूला पूर्वाधारको काममा प्राधिकरण केन्द्रित हुन सक्छ । ५० प्रतिशत नागरिकको गुनासो आर्थिक स्रोत नै हो । अर्थ मन्त्रालयले हालै ३ लाख रुपैयाँको कार्यविधि पास गरेको छ । अब राष्ट्र बैंक र वाणिज्य बैंकहरूले कुन सर्तमा आफ्नो जोखिम कम गरेर यो रकम उपलब्ध गराउन सक्छन् भन्नेमा काम गर्नुपर्नेछ ।
ठूला परियोजनामा दृढताका साथ लगानी गर्नुपर्छ
उनुपर्छ भन्ने कुरामा निजी क्षेत्रको जोड छ । विगतका वर्षमा ढिला गरी बजेट आउने गरेको थियो । ढिला गरी बजेट आउँदा विकासका काम प्रभावित भएका थिए । र, सरकारले समग्र देश विकासलाई अघि बढाउन बजेट १५ जेठमा ल्याउने गरी संवैधानिक व्यवस्था गरेकोमा निजी क्षेत्र खुसी छ । गत वर्ष संविधानले तोकेकै मितिमा बजेट आयो र यो वर्ष पनि तोकिएकै मितिमा बजेट आउने हाम्रो अपेक्षा छ । तर, यसपटक १५ जेठमै बजेट आउँदैन र विगतकै स्थितिमा पो पुग्छ कि भन्ने चिन्ताचाहिँ बढेको छ । अहिले पूर्ण बजेट आउँछ कि आउँदैन । पूर्ण बजेट आयो भने पनि सरकारका विभिन्न नीति–नियमहरु परिवर्तन हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने चासो उत्तिकै बढेको छ ।
सरकारले लगानीका लागि विभिन्न वातावरण बनाइरहँदा यहाँ उद्योग खोल्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । मेरो आफ्नै सिमेन्ट उद्योग छ र त्यसको अहिले क्षमता दोब्बरभन्दा बढी गरिएको छ । यहीँ खानी भएका कारण शतप्रतिशत लगानी स्वदेशी वस्तुमै गर्न पाइएको छ । अहिले सिमेन्ट क्षेत्रमा ठूलो लगानी भएको छ र आत्मनिर्भरताबाट निर्यातको पहल गर्र्नेसम्मको स्थितिमा पुगेका छौँ । यद्यपि अहिले विभिन्न कारणले निर्यात गर्न समस्या भोगिरहेका छौँ । हाम्रा केही सीमा छन् वा भू–परिवेष्ठित राष्ट्रको बेफाइदाले हुन सक्छ, हामी विदेशी बजारसम्म पुग्न समस्या खेप्नुपरेको छ । निर्यात क्षेत्रका समस्यालाई बजेटका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।
पूर्वाधार र ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा बजेटका माध्यमबाटै हामीले विशेष योजना ल्याउनुपर्छ । यसले विकासको बाटोमा मुलुकलाई डोर्‍याउन मद्दत गर्छ । त्यस्तै सरकार–निजी क्षेत्र साझेदारी (पिपिपी) केन्द्रको स्थापना गरेर लगानी प्रवद्र्धनका क्षेत्रमा काम गर्नुपर्छ । ठूला परियोजनामा लगानी गर्न सरकार दृढताका साथ अघि बढ्नुपर्छ । स्थानीयस्तरमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ प्रयोग गरी कुनै वस्तु उत्पादन हुन्छ भने त्यस्तो वस्तुको करमा सहुलियत दिनु आवश्यक छ । त्यस्तै, हाम्रा सबै नीति, नियम श्रममैत्री हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।
कुनै विशेष क्षेत्रमा लगानी गर्न आउने उद्यमीलाई सरकारले नीतिगत सहजता प्रदान गरी उत्साहित गर्नुपर्छ । एउटा व्यक्ति लगानीका लागि तयार हुँदा समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई ठूलो फाइदा नहोला, तर सम्बन्धित क्षेत्रको विकासमा केही न केही महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।
कसैले स्वामित्व नलिने बजेटको औचित्य छैन
प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिइसक्नुभयो । राजीनामा दिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपतिले पढ्नुको के औचित्य हुने हो ? यस्तो सरकारले बजेट ल्याउने र त्यसको स्वामित्व अर्को सरकारले नलिने कारणले गर्दा चालू वर्षको बजेट कार्यान्वयन राम्रो हुन सकेको छैन । अहिले जे भएको छ, आगामी वर्ष पनि त्यही हुनेवाला छ । नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याएर राजीनामा दिएको भए यो यही सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बजेट होला भनिन्थ्यो । कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिन्थ्यो । तर, राजीनामा दिएको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र त्यसैका आधारमा आएको बजेटको स्वामित्व कसैले लिनेवाला छैन ।
त्यसैले अर्थमन्त्रीले ४ देखि ५ पेजको बजेटको एनेक्स पेस गर्नुपर्छ । त्यो सरकारको आय–व्ययका रूपमा रहेको हुन्छ । पूर्ण बजेट ल्याउन चाहेको भए राजीनामा गर्नु हुँदैनथ्यो । राजीनामा दिइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कुनै पनि हालतमा उचित होइन, यस्ता कुराको नजिर बस्नु पनि हुँदैन । त्यसो हुँदा अहिले बजेट ल्याउन जुन प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ, त्यसैमा मेरो आपत्ति छ । बजेट प्राविधिक दस्ताबेज होइन, अर्थ–राजनीतिक दस्ताबेज हो । चुनावमा गएका पार्टीहरूले आफ्नो प्रतिबद्धता बजेटमार्फत जाहेर गर्ने हो । यस आधारमा भन्दा पनि त्यस किसिमको प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने अर्को मान्छे आउँछ । उसले पो त्यो बजेट बनाउन पाउनुपर्छ । त्यसो हुँदा अब बन्ने सरकारले पेस गर्नुपर्ने कार्यक्रम कामचलाउ सरकारले नै ल्याउनुपर्छ भन्ने माग निजी क्षेत्रले गर्नु पनि भएन ।
पूर्ण बजेट ल्याउन चाहेको भए राजीनामा गर्नु हुँदैनथ्यो । राजीनामा दिइसकेपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने कुनै पनि हालतमा उचित होइन, यस्ता कुराको नजिर बस्नु पनि हुँदैन ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरूप बजेट त ल्याउनैपर्छ । विगतमा यति धेरै कार्यक्रम आइसकेका छन् कि निजी क्षेत्रले योचाहिँ भएन भनेर गुनासो गर्ने ठाउँ रहँदैन । करका विषय सम्बोधन गर्नुपर्ने केही होलान् । यसपछि बन्ने नयाँ सरकारले करमा सुधार गर्न सकिहाल्छ । त्यसैले यो बजेटसँग धेरै अपेक्षा गर्नु उचित हुँदैन । बजेट सपना बाँड्ने दस्ताबेज पनि हो । त्यसो हुँदा विकासको सपना देखाउनुपर्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ दशमलव २ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिने भनेको छ । त्यसका लागि १९० अर्बजतिको मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । त्यसका लागि ९ देखि साढे ९ खर्ब पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ । त्यसको आधा निजी क्षेत्रले लगानी ग¥यो भने पनि ४–साढे ४ खर्ब सरकारले लगानी गर्नुपर्छ । त्यसमा ३ खर्बजति बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण लगानी हुन सक्छ । त्यसैले विदेशी लगानी पनि चाहिन्छ । त्यसैले बाह्य लगानीको वातावरण सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले गर्नुपर्ने खर्चमध्ये १ खर्बजति पुनिर्निर्माणमा जनताले खर्च गरे पनि साढे ३ खर्बजति सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसो हुँदा राजस्व जहाँसम्म उठ्छ, त्यहाँसम्म र आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋणले धानिनेसम्मको आकारमा जानैपर्छ ।
सरकारले समयमा निर्णय नगर्दा खर्च हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सक्दैन । स्थानीय तहमा काम गर्ने वातावरण बनाइदिन सक्दैन । निर्माण सामग्रीको अभाव हटाइदिन सक्दैन । तर, निजी क्षेत्रका पनि सीमा छन् । १ खर्बको ठेक्का सम्पन्न गर्नलाई निजी क्षेत्रले ५ वर्ष लगाउँछ भने एकैचोटि ४ खर्बको ठेक्का लियो भने निजी क्षेत्रले कहिले सम्पन्न गर्ला ? सार्वजनिक निजी साझेदारी गरियो भने सरकार र निजी क्षेत्र दुवैका क्षमता बढाउन सकिन्छ । केही खर्बका आयोजना बहुवर्षीय ठेक्कामा छन्, त्यहाँ साधनको पनि अभाव छैन । तर, ठेक्का लिइसकेपछि काम भएको छैन । ठेक्का लागेर काम किन भएन भनेर सोच्नुपर्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको क्षमताको पनि मूल्यांकन हुनुपर्छ । त्यसो भयो भने बाहिरको क्षमता पुँजी र प्रविधि चाहिने–नचाहिने तय गर्न सकिन्छ । निर्णय गर्ने मन्त्रीको क्षमता, त्यो कार्यान्वयन गर्ने सचिवको क्षमता र ठेक्कापट्टा चलाउने निजी क्षेत्रको क्षमता विकास हुनुपर्छ ।
संघीयतामा बजेट विनियोजनका मापदण्डका विषयमा जनसंख्या, भूगोल, गरिबीको अवस्था, पूर्वाधारलगायतमा सरकारले तयारी गर्र्दै छ । यसमध्ये ६०–७० प्रतिशत भार जनसंख्यालाई दिएको छ । त्यो मोडलले हामीलाई सहरमुखी विकासको प्रणालीतर्फ लैजान्छ । तर, ग्रामीण प्रणालीलाई सहरी प्रणालीसँग नजोडीकन, त्यहाँ उत्पादनलाई सहरसँग नजोडीकन हुँदैन । त्यसो हुँदा ५० प्रतिशतभन्दा बढी वजन जनसंख्यालाई दिनुहुन्न । यदि त्यो भारलाई यत्तिकै छोडियो भने त्यसले बहुआयामिक गरिबीलाई अझै बढाउनेछ ।
दुई–तीन तरिकाबाट तल पैसा जान्छ । पहिलो जिल्लाका कार्यक्रम र हिजोका अनुदान एकमुष्ट जाने भो । तल संरचना नबनेका कारण त्यसरी जाने पैसा एकमुष्ट राख्नुपर्छ । तर, त्यो रकम विविध शीर्षकमा राख्नुहुन्न । त्यो रकम प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगले एउटा सूत्र बनाई बाँडफाँड गर्छ । त्यो सूत्रका विषयमा संसद्लाई पनि जानकारी दिनुपर्छ । सांसद विकास कोष, निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषलगायतका पैसा पनि एकमुष्टै राख्नुपर्छ । ती सबै पैसा तलै जाने हुन् ।
नदीलाई आराम गर्न दिने समय भनेर असार, साउन र भदौमा खोलामा पस्न दिइँदैन । त्यसो हुँदा सरकारले सबैभन्दा धेरै खर्च गर्ने समयमा ढुंगागिटीजस्ता निर्माण सामग्रीको अभाव हुने गरेको छ । कानुनमा के लेखेको छ भन्दा पनि खोलामा बाढी आएको छ कि छैन भनेर त्यहाँबाट निर्माण सामग्री निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसमा व्यवहारवादी हुनैपर्छ ।
१५ जेठमा बजेट ल्याउने व्यवस्था नभत्काउन हामीले नै भनेका हौँ
संविधानमा नै बजेट घोषणा गर्ने मिति निर्धारण गरिएको छ । यसअनुसार नै सधैँ बजेट आउनुपर्छ । यो विकसित देशको अभ्यास र आफ्नै अनुभवबाट पनि हामीले बजेट ल्याउने मिति निर्धारण गरेका हौँ । यसकारण पनि तोकिएको मितिमा बजेट सार्वजनिक हुनुपर्छ ।
भारतको अर्थतन्त्रसँग नेपाल जोडिएको छ । भारतको पनि बजेट ल्याउने निश्चित मिति छ । त्यसअनुसार पनि भारतको भन्दा हाम्रो बजेट पछाडि ल्याउनुपर्ने र त्यहाँ निर्धारण हुने करलगायतका विषयले पनि हामीलाई प्रभावित गर्ने भएकाले उनीहरूको भन्दा पछाडि पु¥याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा र यहाँको मौसम, काम गर्ने अवस्थालगायतलाई पनि हेरेर बजेट ल्याउने मिति सहमतिमा नै संविधानमा निर्धारण भएको हो ।
यसकारण यो व्यवस्थालाई सरकारले भत्काऔँ भनेर प्रस्ताव पनि गरेको हो । एकपटकचाहिँ असार मसान्तमा बजेट लैजाआंैँ र अर्कोपटकदेखि तोकिएकै मितिमा ल्याऔँ भन्ने प्रस्ताव भएको थियो । तर, एकपटक भत्कायौँ भने फेरि अर्कोपटक पनि भत्किन्छ भन्ने लागेर बजेट ल्याउनका लागि हामी खुला भएका हौँ । आगामी बजेट संविधानअनुसार पूर्ण नै आउनुपर्छ । तर, यसपटकको बजेटमा सरकारले केही विषयमा पूर्ण रूपले केही मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ । पहिलो, यो सरकारले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुहुँदैन । किनभने एकातिर निर्वाचन आयोगले लगाएको आचारसंहिताको विषय छ भने अर्कोतिर राजीनामा दिएपछि सरकारको अवस्था कामचलाउ हुन पुगेको छ । यस्तो सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनु नै हुँदैन ।
आगामी बजेट संविधानअनुसार पूर्ण नै आउनुपर्छ । तर, यसपटकको बजेटमा सरकारले केही विषयमा पूर्ण रूपले केही मान्यतालाई पालना गर्नुपर्छ । यो सरकारले कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्नुहुँदैन ।
अर्कोतिर बजेटमा भने कार्यक्रम उल्लेख नगर्ने, तर बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । विशेष गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा योजना उल्लेख नगरी बजेट विनियोजन गर्ने गरिएको छ । हामीले यस्तो काम नहोस् भनेर प्रस्ट भनेका छौँ । लुकाएर होस् वा देखाएर कुनै पनि नयाँ कार्यक्रम पर्नुभएन । प्रधानमन्त्रीसँग मंगलबारको छलफलमा पनि भनेका छौँ । त्यस्तै, एकमुष्ट रकम राख्ने र चुनाव सकेपछि वितरण गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । त्यस प्रस्तावलाई पनि हामीले अस्वीकार गरेका छौँ । किनकि, अहिले सरकारले राखेको एकमुष्ट बजेट पछि कसले बाँड्छ ? पछि त सरकारको एकलौटी अधिकार बन्छ र आफ्नो आवश्यकता र इच्छाअनुसार खर्च गर्छ । यसले अराजकता सिर्जना गर्ने भएकाले हामीले अस्वीकार गरेका हौँ ।
अर्को विषय, यस अवस्थामा बजेट ल्याउँदा विभिन्न प्रभावमा परेर राजस्वमा छुट दिने वा विभिन्न स्किम ल्याउने काम हुनुहुँदैन । व्यवसायीलाई प्रभावित पार्ने वा आकर्षित गर्ने हिसाबले त्यस्तो गर्न सक्ने सम्भावना हुने भएकाले त्यस्तो गर्न मिल्दैन भनेका छौँ । त्यस्तै, कर फस्र्यौट आयोगले गरेका काम र एनसेलको कर उठाउने विषयलगायतमा पनि अहिले विवाद र फरक धारणा प्रबल भइरहेका छन् । यस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले ध्यान दिन सक्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना हामीले केही वर्षपहिलेदेखि नै सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । आगामी बजेटमा रकम राख्ने ठाउँ पनि सरकारलाई खोज्नुपर्ने छैन । किनकि, तिनै गौरवका आयोजनामा बजेट राखिदिँदा हुन्छ । यिनै कार्यक्रम राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो भने मुलुकको ठूलो प्रगति हुनेवाला छ । त्यसैले यो कामलाई पनि प्राथमिकता दिएर बजेट छुट्याउँदा हुन्छ ।
अर्कोतिर स्थानीय तहमा विनियोजन हुने बजेट अर्को प्राथमिक विषय हो । संविधानले पनि स्थानीय तहलाई पूर्ण अधिकार दिएको छ । नयाँ संरचनामा गएपछि जिल्लाका दर्जनभन्दा बढी कार्यालय बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा सीधै बजेट जाने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । त्यस्तै, विकासका काममा जाने निशर्त र सशर्त बजेट तथा कर्मचारीलाई जाने तलब सुविधा राम्रोस“ग व्यवस्थित भएर जान आवश्यक छ ।
अर्को, सरकारले ७ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य छ । यो राम्रो लक्ष्य हो । तर, यो वर्ष भाग्यले साथ दिएर पनि वृद्धिदर उच्च देखिएको हो । मौसम राम्रो भयो । धानको उत्पादन बढ्यो, त्यस्तै, पुनर्निर्माणको काम पनि केही मात्रामा भयो । सरकारको संयन्त्रबाट काम भएको छैन । तर, निजी घरहरू निर्माण गर्ने काम भएको छ । त्यस्तै, यो वर्ष विद्युत्मा सुधार भयो यसले पनि आर्थिक वृद्धिदरलाई सहयोग पुग्यो । तर, अर्को वर्ष यो वर्षको जत्तिकै आर्थिक वृद्धि राख्नु ठूलो चुनौती छ । किनकि गर्नुपर्ने ठूला पूर्वाधार आयोजना निर्माणको काम करिब शून्य छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, मध्यपहाडी, फास्ट ट्र्याक, हुलाकी राजमार्ग, पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल र भैरहवा क्षत्रीय विमानस्थल लगायतमा प्रगति अत्यन्त न्यून छ । यस्ता आर्थिक वृद्धि गराउन सक्ने आयोजनामा हरेक वर्ष बजेट विनियोजन हुने, तर काम नहुने अवस्था सबैका लागि लाजमर्दो अवस्था छ ।
यसकारण पूर्वाधार निर्माणबाट हुनुपर्ने आर्थिक वृद्धि हुन सकिरहेको छैन । यसले सिर्जना गर्ने रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन । कुनै पनि प्रगति देखिएको छैन । यो वर्ष कर्मचारी यता र उता व्यवस्थापन गर्दा नै समय लाग्नेछ । विभिन्न तहमा जाने र आउनेमा समय लाग्नेछ । यसकारण यो वर्ष आउने समस्याको समाधान गर्ने उपायसहित बजेटमा व्यवस्था भएर आयो भने त्यसले देशलाई सहयोग पुर्‍याउँछ ।
अहिले कार्यान्वयनमा रहेका कार्यक्रम र नीति नियमबाट पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ । स्किम र राजस्व दरको विषयमा निजी क्षेत्रले पनि ठूलो चिन्ता गर्नुपर्दैन । चुनावलाई प्रभाव पार्ने क्षणिक लोकप्रिय हुने कार्यक्रम नल्याउनका लागि सरकारलाई ध्यानकर्षण गराएका छौँ ।
खर्च गर्ने क्षमता बढाउनुपर्छ
डेपुटी गर्भनर, नेपाल राष्ट्र बैंक
संविधानअनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट १५ जेठमा जारी गर्ने प्रावधान छ । र, सोही प्रावधानअनुसार बजेट सार्वजनिक गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले आफ्ना गतिविधि अघि बढाइरहेको छ । अहिले परिस्थिति यस्तो बनेको छ कि संविधानले तोकेको १५ जेठलाई विचार गर्नुपर्ने, निर्वाचन आचारसंहितालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने र अहिलेको जटिल राजनीतिक परिस्थितिलाई पनि विचार गरी बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ । बजेट समयमै आउनुपर्छ भन्ने सबैको धारणा छ । राजनीतिक सहमतिका आधारमा ल्याइने यस बजेट पूर्ण आउनुपर्छ । तर, नयाँ कार्यक्रम आउनुहुन्न भन्ने धारणा बनेको छ ।
नयाँ कार्यक्रम केही नराख्ने भन्ने पनि होइन, देशको आर्थिक समृद्धिका लागि जारी गर्नुपर्ने प्राथमिकताप्राप्त कार्यहरू ल्याउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, पूर्वाधारलगायतका क्षेत्रको विकासका लागि कार्यक्रम आउनुपर्छ । यी कुरालाई प्राथमिकता दिन सकियो भने देशको अर्थतन्त्र पनि अगाडि बढ्छ । यस हिसाबले हेर्दा नयाँ र लोकप्रिय नाराहरू केही समावेश नहुने, तर विकासका लागि नभई नहुने कार्यहरू नछुट्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ । चौधौँ त्रिवर्षीय योजनामा उल्लेख भएका कुरालाई पनि समावेश गर्नु आवश्यक छ । हामीले ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हिसाबले बजेटका कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएको छ ।
नयाँ र लोकप्रिय नाराहरू केही समावेश नहुने, तर विकासका लागि नभई नहुने कार्यहरू नछुट्ने गरी बजेट ल्याउने
तयारीमा छौँ ।
त्यस्तै, पुननिर्माणको काम अघि बढाउने, संघीयतालाई विचार गरेर स्थानीय स्तरमा पनि बजेट ल्याउनु आवश्यक छ । किनभने यसपटक स्थानीय सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । र, बजेट केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय स्तरका हिसाबले ल्याउने तयारी भएको छ । यसमा पनि अलि बढी जोड स्थानीय सरकारले नै योजना बनाउने गरी खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा दिएको छ । अहिले पनि हामीले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग बजेटका लागि परामर्श गरिरहेका छौँ र विज्ञको सुझाब बजेट निर्माणका लागि अति नै महत्वपूर्ण हुनेछन् ।
अहिले राजीनामा दिइसकेको सरकारले बजेट ल्याउनुहुन्न भन्ने तर्क पनि उठिरहेको छ । सरकार परिवर्तन राजनीतिक विषय हो, तर बजेट आर्थिक विषय हो । त्यसैले बजेटलाई पूर्ण आकार दिएर ल्याउने विषयमा सरकार लागिपरेको छ र राम्रो बजेट ल्याउने गृहकार्य भइरहेको छ । अहिलेको राष्ट्रिय गतिविधि र सबै पक्षलाई समेटेर बजेट आउँछ, यसमा सबै पक्ष ढुक्क भए हुन्छ ।
७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी
प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय
नयाँ र लोकप्रिय नाराहरू केही समावेश नहुने, तर विकासका लागि नभई नहुने कार्यहरू नछुट्ने गरी बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ ।
सहमतिमा बजेट आओस् करको भार नथपियोस्
अहिले हामी एकदमै महत्वपूर्ण अवस्थामा छौँ । राजनीतिक संक्रमण स्थिरतातर्फ गइरहेको छ । भर्खर पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । अब दोस्रो तहको चुनाव पनि नजिकिँदै गइरहेको छ । हामी संघीयता कार्यन्वयनतर्फ पनि गइरहेका छौँ ।
निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष बजेटलाई कुरेर बसेको हुन्छ । आफ्ना समस्या समाधान तथा नीतिगत सहजीकरणका लागि बजेट कुर्छौं, हामी । अहिले पनि कुरिरहेका छौँ । तर, राजनीतिक विवादका कारण बजेट कस्तो आउने भन्नेमा अन्योल छ । नयाँ कार्यक्रम नआउने भनिएको छ । यसले हामीलाई निराश बनाएको छ ।
कतिपय राजनीतिक दल र नेताले निर्वाचन प्रभावित हुने भन्दै आगामी आवको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नहुने भनेका छन् । तर, यो अर्थतन्त्रका लागि राम्रो होइन । राजनीतिक विवाद हल गर्दै आर्थिक एजेन्डालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ । राजनीतिक दल आफ्ना भाषणमा आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छन् । अब राजनीति होइन, आर्थिक मुद्दा मुख्य हो भन्छन्, तर व्यवहार त्यस्तो गर्दैनन् । यसर्थ, आर्थिक मुद्दा र एजेन्डामा बोलेअनुसारको व्यवहार गर्नुपर्छ ।
अहिले संघीय तहसम्म पुग्ने बजेट राम्रो आउनुपथ्र्यो । राजनीतिक परिस्थितिले आर्थिक परिसूचकलाई प्रभाव पार्नुहुँदैन । चालू आवमा हामीले झन्डै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भएका छौँ । त्यस्तै, हामीले आगामी आवमा ७ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिने भनेका छौँ । यसर्थ, हाम्रो उद्देश्य दिगो आर्थिक वृद्धि हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सबै उद्योगी व्यवसायीका तर्फबाट अर्थमन्त्रालयमा बजेटका लागि सुझाब पनि दिएको छ । लघु, घरेलु, साना, मझौला र ठूलासमेत सबैखाले उद्योगी व्यवसायीको माग तथा सुझाब समेटेर अर्थमन्त्रालयमा बुझाएका छौँ । आशा छ, हाम्रा माग तथा सुझाब कार्यन्वयन हुनेछ । उद्यमीको मनोबल बढ्नेछ ।
निजी क्षेत्र पनि सहमतिमै बजेट आओस् भन्ने चाहना राख्छ । सहमति नगरी आएको बजेट कार्यान्वयन नहुन पनि सक्छ । एउटाले बजेट ल्याउने र अर्कोले कार्यान्वयन नगर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसर्थ, बजेटमा सहमति हुनैपर्छ । यसै पनि हाम्रो बजेट खर्चको अवस्था निराशाजनक छ । चालू आवमा पनि राम्रा कार्यक्रम तथा नीति आएको हो । तर, कार्यान्वयनको पाटो फितलो रह्यो ।
निजी क्षेत्रले हरेक वर्ष बजेटलाई कुरेर बसेको हुन्छ । आफ्ना समस्या समाधान तथा नीतिगत सहजीकरणका लागि बजेट कुर्छौं, हामी । अबको बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नआउने भनिएको छ । यसले हामीलाई निराश बनाएको छ ।
भैरहवा एयरपोर्ट, पोखरा, फास्ट ट्र्याक, बूढीगण्डकीलगायत आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो अघि बढाउनुपर्छ । यस्ता परियोजनामा राजनीतीकरण गर्नुहुँदैन । यस्ता परियोजना अघि बढ्नेबित्तिकै पुँजीगत खर्च पनि बढ्छ । यसतर्फ, ध्यान दिनुपर्छ । अहिलेको समय भनेको उत्पादनशील उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने हो । कृषि क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने जिडिपीमा कृषिको योगदान ३५ प्रतिशत थियो । तर, अहिले ३० प्रतिशतमा झरिसकेको छ । यसर्थ, कृषिमा आधारित उत्पादनशील उद्योगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
जुन देशमा कर प्रणाली र प्रशासन राम्रो हुन्छ, त्यहाँ आर्थिक वृद्धि पनि राम्रो हुन्छ । यहाँ, हाम्रा करमा नीतिमा पनि थुप्रै समस्या छ । हामी स–साना करका समस्यामा अल्झिरहेका छौँ । साना करदाताका थुप्रै समस्या छन् । करको दायरा बढाउनुपर्ने छ । राजस्व न्यायाधीकरणमा जाँदा धरौटी राख्नुपर्ने चलन छ । यसलाई पनि हटाउन या घटाउनुपर्नेछ । एक तह भन्सार घटाउनुपर्ने पनि छ । आन्तरिक राजस्वमा दोहोरो हुने गरेको छ । अर्थमन्त्रीले यसमा विशेष चासो राखेर सुझाब कार्यान्वयन गर्छु भन्ने भएको थियो ।
अब संघीय संरचनामा चालू खर्च धेरै चाहिन्छ । यसका लागि विकास बजेट घटाउने वा निजी क्षेत्रलाई करको भार बढाउने सम्भावना हुन सक्छ । त्यसैले यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । हामीलाई थप बोझ नथपियोस् भन्न चाहन्छौँ । अब तल्लो तहमा जाने बजेट कार्यान्वयन तथा विकासका मुद्दामा स्थानीय निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइयोस् । तर, पछिल्लो सयम देखिएको राजनीतिक परिस्थितिका कारण बजेटबारे जुन अन्योल देखिएको छ, त्यसबाट हामी आशावादी हुन सकेका छैनौँ । राजनीतिक सहमति गरेर दिगो विकास हासिल हुने गरी बजेट ल्याउन नेतालाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ ।
वृद्धिका संवाहक के हुन् भन्नेमा पुनर्समीक्षा आवश्यक
राष्ट्र बैंकले समष्टिगत अर्थतन्त्रको प्रोजेक्सन गर्छ र तरलताको अनुगमन गर्छ । अहिले जुन क्रेडिट क्रन्चको स्थिति आएको भनिएको छ, यो कुनै संकटको अवस्था नै होइन । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको विस्तार २० प्रतिशत भए हुन्छ, त्यसले समष्टिगत अर्थतन्त्रको विस्तारलाई धान्छ र वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आउँदैन भनेको थियो । त्यसबाट भुक्तानी सन्तुलनमा समस्या हुँदैन, त्यो नै उपयुक्त अंक हो भनेर पूर्वानुमान गरिसकेको अवस्थामा विभिन्न उद्देश्यका कारणले भकाभक ३२ प्रतिशत कर्जा विस्तार भयो । लक्ष्य २० प्रतिशत, कार्यान्वयन ३२ प्रतिशत भएर असन्तुलनको अवस्था सिर्जना हुनुलाई राष्ट्र बैंकको पूर्वानुमान क्षमता पुगेन भन्नु गल्ती हुन्छ । अहिले ९ महिनाको तथ्यांकलाई हेर्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको वृद्धिदर २४ प्रतिशतमा झरेको छ । अब आगामी असार मसान्तसम्म त्यो दर २० प्रतिशतमा झर्छ भन्ने हामीले अनुमान गरेका छौँ ।
आगामी वर्षको बजेटले समष्टिगत आर्थिक खाका र वर्तमान परिदृश्यलाई आधार मानेर बजेट माग गर्नुपर्छ । हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू गरेका छौँ । विकासशील देश र मध्यम आय भएको मुलुकका रूपमा स्तरोन्नति हुने हाम्रो प्रतिबद्धता छ । चार वर्षयता बजेट बचतमा रहेको छ । बजेटघाटाको विषय नै हराएको छ । सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशतमा झरेको अवस्था छ । यस्ता विषयलाई हेरेर बजेट बनाउनुपर्छ । हामीले पूर्वबजेट समीक्षामा यी कुरा राखेका छौँ ।
बजेटले मध्यकालीन सोच राख्नुपर्छ । त्यो भनेको हामी खुला बजार कारोबार गर्छौं । तरलता प्रसोचन गर्न वा तरलता प्रवाह गर्न खुला बजार कारोबार हुन्छ । त्यहाँ के–कति परिणाममा खुला बजार कारोबार गर्ने भन्नेबारे छलफल गर्दा सरकारका तर्फबाट आएका प्रतिनिधिहरूले विभिन्न कुरा गर्नुहुन्छ । सरकारको ढुकुटीमा २ सय ६० अर्ब नगद मौज्दात छ । त्यसलाई आधार मानेर १ सय ११ अर्बको अक्सन क्यालेन्डर राष्ट्र बैंकले निर्माण गरेकोमा अहिले हामीले रोकिदियौँ । त्यसकारण बजेट कार्यान्वयनको होराइजनलाई हेरेर अल्पकालीन, मध्यकालीन सोच राख्नुपर्छ । अहिले बजेटमा मध्यकालीन सोच हुन्थ्यो भने हामीले क्यालेन्डरमा भएको १ सय ११ अर्ब ऋण उठाउने थियौँ । यो वर्ष भएन त के भो, अर्को वर्ष त गर्न सक्छौँ । तरलता समस्या छैन र फिस्कल स्पेस छ भने ऋण उठाउन सकिन्छ । त्यसकारण बजेट र मौद्रिक नीतिमा यस्तो मध्यकालीन सोचलाई समावेश गरिनुपर्छ ।
आर्थिक वृद्धिका लागि वित्तीय नीतिमा नवप्रवर्तन (इनोभेसन) सम्बन्धी बहसहरू संसारभर बढ्न थालेको छ । त्यसकारण आर्थिक वृद्धिका संवाहकहरू के–के हुन सक्छन् भनेर पुनर्समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । हामीले बजेटमा पनि आर्थिक विकासको संवाहक भनेर कृषिलाई भन्ने गरेका छौँ । एउटा ठूलो हात्तीलाई चलाउने माउते हुन्छ । अब ड्राइभर हात्ती हो कि माउते हो ? ऊर्जाको कुरा छ, लोडसेडिङमा सुधार आएको छ । तर, थप काम भएन भने फेरि लोडसेडिङ फर्किन सक्छ । त्यसकारण ऊर्जामा लगानी बढाउनु आर्थिक विकासका लागि संवाहक हुन सक्छ । पर्यटन क्षेत्रमा विमानस्थलको निर्माणले आर्थिक वृद्धिलाई अघि बढाउन सक्छ । त्यसपछि कृषिका कुरा आउँछन् । त्यसकारण कुनचाहिँ ड्राइभिङ फोर्स (संवाहक शक्ति) हो भन्ने निक्र्योल गरेर मात्रै रणनीतिक हिसाबले लगानी अघि बढाउनुपर्छ ।
नेपाली अर्थतन्त्रमा प्राकृतिक हिसाबले विभिन्न समस्याको सामना गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । प्राकृतिक तथा अन्य प्रकोपले समस्या सिर्जना गर्ने भएकाले बजेटमा अनुकूलन (रिजिलियन्स)का लागि पनि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नको, तेलको बफरदेखि लिएर संस्थाहरूको निर्माण, सञ्चालन विधि र प्रणालीको निर्माणसम्मका कामका लागि बजेट व्यवस्था गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुग्छ । बजेटले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जति पनि काम–कुरा भइरहेका छन्, ती सबै काठमाडौंवरिपरि भइरहेका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत्, नलसिंगाढ आयोजनाको कुरा अघि बढेका छन्, तर पश्चिम सेतीको अत्तोपत्तो छैन । तमोरको अत्तोपत्तो छैन । टिस्टामा त्यत्रो विकास भइसक्यो, तमोरमा केही काम हुन सकेको छैन । त्यसकारण बजेटले क्षेत्रीय सन्तुलनलाई कसरी ध्यान दिने भन्ने पनि विचार गर्नुपर्छ । विगतको १० वर्षे जनयुद्धबाट पनि हामीले पाठ सिक्न आवश्यक छ ।
बजेटले क्षेत्रीय असन्तुलनलाई ध्यान दिनुपर्छ । अहिले जति पनि काम–कुरा भइरहेका छन्, ती सबै काठमाडौंवरिपरि भइरहेका छन् ।
बजेट निर्माण गर्दा गरिबीलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । बाजुरामा ६४ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन् भन्ने तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणले देखाएको छ । अध्ययन गराउँछ सरकारले । तर, त्यसअनुसारको नीति तर्जुमाचाहिँ गर्दैन । अब गरिबीलाई पनि ध्यानमा राखेर बजेटले
नीति लिनुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रका लागि बजेटले दोस्रो तहको नियामक (सेकेन्ड टियर रेगुलेटर) संस्था तत्काल गठन गर्नुपर्छ । वित्तीय पहुँच बढाउनेदेखि वित्तीय स्थायित्वमा हालसालै देखिएका धक्काहरूलाई व्यवस्थापन गर्न पनि त्यस्तो संस्था आवश्यक छ । त्यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि जोडबल गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, पहिले राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा लिऊ भनेर जोडबल गर्नुपथ्र्यो । अहिले बजारले मागेको जति पैसा दिन राष्ट्र बैंकको क्षमता छैन । त्यसकारण सरकारले पनि ४०–५० अर्बको पुनर्कर्जा कोष स्थापना गरोस् । जसले जलविद्युत्, सिमेन्ट, होटेललगायत निर्माणमा वित्तीय क्षेत्रका अल्पकालीन धक्काहरूलाई थेग्न सकियोस् ।
सेयर बजार त छ, तर यो बजार पुँजी निर्माणमा जोडिन सकेको छैन । निजी क्षेत्रको सामथ्र्य विकासमा सरकारले खर्च गरोस् । वित्तीय क्षेत्रमा कन्ट्रिब्युसन ट्याक्स लगाउनुपर्ने अवस्था छ । किनकि, वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम भयो भने त्यसको भार सरकारले लिनुपर्ने हुन्छ । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल नाफामा भारी वृद्धि गरिरहेका छन् । त्यसबाट कर तिर्नुपर्छ । कर्पोरेट क्षेत्रलाई लाभांश कर २५ प्रतिशत र वित्तीय क्षेत्रलाई ३० प्रतिशत भन्ने गुनासो छ । चुरोट, रक्सीलाई बढी कर लगाएजस्तो वित्तीय क्षेत्रजस्तो पारदर्शी क्षेत्रलाई पनि अन्याय भयो भन्ने छ । तर, वित्तीय क्षेत्रले सर्वसाधारणको निक्षेपलाई कर्जा लगानी गरेर असाधारण जोखिम बहन गरेका हुन्छन् । जोखिम जति धेरै हुन्छ, नाफा पनि त्यति नै बढी हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधारमा वित्तीय क्षेत्रलाई संसारभरि नै कर्पोरेट क्षेत्रको भन्दा बढी लाभांश कर लगाउने गरिन्छ । यो कायम हुनुपर्छ ।
निर्माण सामग्रीको समस्या भारतको उत्तर प्रदेश र विहारमा छैन, अमेरिकामा छैन । तर, हिमाल, पहाड र तराईले भरिएको नेपालमा समस्या छ । बजेटले निर्माण सामग्रीको व्यवस्था र त्यसको सहज आपूर्तिका लागि केही व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसले राष्ट्र बैंकलाई मूल्य नियन्त्रणलगायतका काममा पनि सहयोग पुग्छ । आर्थिक विकासको लक्ष्य भेट्टाउन पनि सहयोग गर्छ ।
नेपालले सामाजिक क्षेत्रमा धेरै उन्नति गरेको छ । राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका लक्ष्यहरू नेपालले धेरै हदसम्म भेट्टाएको भन्छौँ । तर, हाम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा अत्यन्त कमजोर हुँदै गएको देखिन्छ । त्यसकारण सरकारले सेन्टर फर एक्सिलेन्टका रूपमा विकास गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यमा काम गर्नुपर्छ । पहाड, मधेस जोड्ने केन्द्रहरूमा यस्ता संस्था खोलेर काम गर्नुपर्छ । अनुसन्धान र विकासमा पनि बजेटले लगानी बढाउनुपर्छ । यसले उत्पादकत्व बढाएर उच्च आर्थिक वृद्धि प्राप्त हुन सक्छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नेपालमा सम्भव छ । वित्तीय क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरेर व्यवसाय गर्ने लागत (कस्ट अफ डुइङ बिजनेस) घटाउनुपर्छ । भारतमा यसको प्रयोग बढ्न थालेको छ । यसले वित्तीय मध्यस्थता लागत पनि घट्छ र उद्योग–व्यवसायको कर्जा लागत पनि घट्छ । राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वका लागि काम गर्छ । वित्तीय क्षेत्रको विकासका लागि वित्तीय नीति (बजेट)को नै ठूलो हात हुन्छ ।
उच्चदरको आर्थिक वृद्धिको अवसर नगुमाऔँ
वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति र बजेटको अन्योलबाट निजी क्षेत्र निराश भएको छ । अहिलेको परिस्थिति हेर्दा आगामी आवको बजेटले हाम्रो आशा, माग वा सुझाब पूरा गर्लाजस्तो लागेको छैन । यो एउटा औपचारिकता जस्तो मात्रै हुने देखिएकाले निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको हो ।
बजेट कस्तो आउने, कस्तो ल्याउने भन्ने पाटो एउटा छ । यसको कार्यान्वयनको पाटो पनि अर्कै छ । बजेट आइसकेपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने, खर्च गर्न नसक्नेलगायत थुप्रै समस्या छन् । बजेट कार्यन्वयन अथवा पुँजीगत खर्चको विषयमा निजी क्षेत्रसमेत असक्षम भएको आरोप लाग्ने गरेको छ । निजी क्षेत्रको क्षमता कमजोर भएको आरोप लाग्छन् । हो, हाम्रो क्षमता कम छ, तर त्यो एकैपटक बढाउन सकिँदैन । हामी निजी क्षेत्र र सरकार एकै सिक्काका दुई पाटा हौँ । अर्थात्, हाम्रो क्षमता अभिवृद्धिमा सरकारको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । निजी क्षेत्रको क्षमता विस्तारमा लगानी गर्ने तथा वातावरण बनाउने विषयमा सरकारको दायित्व पनि उत्तिकै रहेको छ । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी)अनुसार अघि बढ्दा दुवै पक्ष उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले अहिले पनि ठूला परियोजना समयमा नसकेका केही उदाहरण होलान् । तर, नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई अविश्वास गरिहाल्नुहुँदैन । अवसर पनि दिनुपर्छ । अहिले पनि नयाँ परियाजना सीधै बाहिरका निर्माण व्यवसायीलाई दिइन्छ । हाम्रो कमजोरीलाई सुधार्दै जानुपर्ने देखिन्छ । किन समयमा काम गर्न सकिएन ? लो बिडमा ठेक्का दिने परिपाटीका कारण समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको हुन सक्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिन सक्नुपर्छ । र, हामी निजी क्षेत्रले पनि आफ्ना कमीकमजोरी सुधारेर अघि बढ्नुपर्छ ।
निजी क्षेत्रले सधैँ एउटा चिन्ता राख्ने गरेको छ । त्यो भनेको मुलुकमा आर्थिक मुद्दा सर्वोपरि हुनुपर्छ । आर्थिक एजेन्डाभन्दा जरुरी अन्य एजेन्डा हुनै सक्दैन भन्ने हाम्रो धारणा हो । अहिले पनि आर्थिक एजेन्डामा ध्यान दिइएको पाइँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा उत्पादन क्षेत्रले दिएको योगदान घटिरहेको छ । लगानी सम्मेलनमा आएको १४ खर्बको लगानीको प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । स–साना समस्याले गर्दा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पारिरहेको हुन्छ । लगानीकर्तालाई हतोत्साहित गरिरहेको पाइन्छ । यसमा राज्य र राजनीतिक दल गम्भीर हुन आवश्यक छ ।
म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु । मेरो एउटा सानो बायोलोजिकल युनिट छ । त्यसमा मैले एउटा विदेशी परामर्शदाता राख्न खोजेको छु । एउटा प्राविधिकलाई ल्याउन खोजेको छु । तरm अनुमति पाएको छैन । एक वर्षदेखि उनीहरूका लागि वर्क पर्मिट लिन सकेको छैन । कहिलेकाहीँ हामी अनावश्यक राष्ट्रवादमा अल्झिन्छौँ । जसले हामीलाई झन् पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ । एउटा विदेशी यहाँ आएर काम गर्छ भने घर भाडामा लिन्छ, गाडी चढ्छ, रेस्टुराँमा खाना खान्छ जसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई योगदान दिइरहेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शंकाको दृष्टिकोणले हेर्नुहुँदैन । यो एउटा मेरो मात्रै समस्या होइन, यस्तो समस्या धेरैका छन् ।
कहिलेकाहीँ हामी अनावश्यक राष्ट्रवादमा अल्झिन्छौँ । जसले हामीलाई झन् पछाडि धकेलिरहेको हुन्छ ।
हामी अर्बौंको लगानी नेपाल भित्रयाउन चाहन्छौँ । तर, स–साना समस्याले त्यसलाई रोकिरहेको छ । दुई वर्षदेखि प्रयास गर्दा पनि श्रम ऐन आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र र श्रमिक मिलेर साझा समझदारीमा तयार पारेको मस्यौदा संसद्मा छ । विदेशी लगानी ल्याउने हो र स्वदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने हो भने यस्ता स–साना समस्या समाधानमा विशेष जोड दिनैपर्छ । यसले राजस्व घटाउँदैन, बढाउँछ । बजेटबाट यस्ता समस्या समाधान हनेमा धेरै आशावादी थियौँ । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी समस्या हल होला भन्ने आशा थियो । तर, निराश भएका छौँ । अहिले हामीले उच्चदरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने एउटा ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गरेका छौँ । धेरैपछि यो वृद्धिको अवसर पाएका छौँ । यसलाई सदुपयोग गर्नुपर्नेमा हामी उल्टै राजनीतिक उल्झनमा लाग्यौँ । हामीलाई यसले पश्चाताप दिनेछ । हामी राजनीतिमा मात्रै अल्झिराख्यौंँ भने साँच्चै पछि पछुताउनुपर्नेछ ।
आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन
लगानीको कुरा गर्दा विदेशी लगानीको मात्र कुरा गरेर हुँदैन । हामीले आन्तरिक लगानीलाई प्राथमिकता दियौँ र आन्तरिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रकारको नीति हुन सक्यो भने मात्र हामी अघि बढ्न सक्छौंँ । बाहिरको लगानी आउने भनेको स्थानीय लगानीकर्तासँग साझेदारी गर्ने गरी आउन सक्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ । त्यसैकारण बाहिरबाट आउने लगानीभन्दा पनि आन्तरिक लगानीलाई मार्गनिर्देश गर्ने र प्रोत्साहन गर्ने किसिमको बजेट आउन सक्नुपर्छ ।
त्यस्तै, पूर्वाधारको कुरा गर्नुपर्दा हामी खास गरेर पूर्वाधार निर्माणको काम देख्छौँ । एउटा कुनै ठेक्का लिने, एड्भान्स लिने अनि त्यो पैसा सेयरमा लगाउने वा जग्गामा लगाउने देखिएको छ । त्यसैले निर्माणको काम जसरी ढिला भएका छन्, त्यसलाई रोक्ने र समयमै काम गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने किसिमको नीति आउनुपर्छ । जति छिटो काम सक्छ, त्यति बढी प्रोत्साहन पाउनुपर्‍यो । यदि कसैले एक अर्बको ठेक्का दिनु छ भने समयमै काम सक्नेलाई एक अर्ब २० करोड दिनुपर्‍यो । अनि समयमै काम हुन्छ ।
बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नआए पनि लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने प्रकारको नीति आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने हो भने बाहिरबाट आउने लगानी स्वचालित हिसाबमा आउँछ भन्ने मेरो सोच हो
बैंकिङ क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा कुनै समस्या नै छैनजस्तो देखिन्छ । तर, वास्तविकता त्यो होइन । एउटा बैंकको अध्यक्षको नाताले पनि मैले के भनेको छु भने अहिले समस्या छ । बिहान मात्रै एकजना मानिस मकहाँ आउनुभयो । उहाँको भनाइ थियो कि बिमा पोलिसीबाट आउने पैसा ठूलो मात्रामा परिवर्तन भयो । किनभने गाडीको बिमा पोलिसी घट्यो । अर्थात् गाडी बिक्री घट्यो । हुन त निजी क्षेत्रमा बैंकबाट २० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ३२ प्रतिशत लगाइसकेको छ भन्ने कुरा आएको छ । त्यो होला, तर हिजो मात्र मैले अर्थ सचिवज्यूसँग पनि कुरा गरेको थिएँ । अहिले बैंकहरूलाई कतै न कतैबाट जुन अप्ठ्यारो परिरहेको छ, असार मसान्तपछि पनि यो अवस्था रहने हो भने कर संकलनदेखि धेरै कुरामा यसले असर पर्छ । त्यसैले सरकारले बजेटमै केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसबाहेक संघीयताका हिसाबले स्थानीय तहमा आफैँ नीति बनाउने र आफैँ कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कतै यो अनुशासित हिसाबले खर्च नहुने वा सही संयन्त्र नभई खर्च गर्ने हुन थाल्यो भने हामीले सोचेअनुसार विकास हुँदैन कि भन्ने मलाई पनि लाग्छ । त्यसैले संक्षेपमा भन्दा बजेटमा नयाँ कार्यक्रम नआए पनि लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने प्रकारको नीति आउनुपर्छ भन्ने लाग्छ । स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने हो भने बाहिरबाट आउने लगानी स्वचालित हिसाबमा आउँछ भन्ने मेरो सोच हो । यहाँ कुनै नयाँ काम गर्न खोज्यो भने त्यसलाई रोक्न खोज्ने प्रवृत्ति पनि छ । त्यसैले बजेटबाटै त्यसलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गरेर वैदेशिक रोजगारीमा जाने जनशक्तिलाई नेपालमै काम गर्न दिने वातावरण सिर्जना हुनुपर्छ ।
बढी कर उठ्नु निजी क्षेत्रको सफलता
मेरो बैंकमा ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेपकर्ताको पैसा छ भने लगानीकर्ताको ४ अर्ब पनि छैन । त्यसकारण मेरो ध्यान लगानीकर्तामा भन्दा त्यसको १० गुणा बढी पुँजी परिचालन गर्ने निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षणमा केन्द्रित हुन्छ । त्यसले गर्दा मैले कर्जा प्रवाह गर्दा ब्याजसहित साँवा फिर्ता आओस् भन्ने चाहन्छु । बैंक आफैँले परियोजना बनाउँदैन । मेगा बैंकले मेगा हाइड्रो, मेगा होटेल वा मेगा अस्पताल भनेर खोल्दैन । निजी क्षेत्रले लगानीको सम्भावना देख्यो भने उनीहरूले बैंकमा प्रस्ताव लिएर आउँछन् । त्यो प्रस्तावको जोखिम, सुरक्षण र प्रतिफल हेरेर बैंकले लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन्छ । कुनै पनि राम्रो प्रस्ताव आउँदा बैंकले लगानी नगर्ने भन्ने कुरा नै आउँदैन । तर, उत्पादनमूलक क्षेत्रको कुरा आउँदा हामी सबै बसेर उत्पादनमूलक क्षेत्र भनेको के हो भन्नेमा छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले उत्पादनमूलक क्षेत्रको सूचीलाई हेर्ने हो भने धेरै कुरा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पर्दै पर्दैन । प्रतीतपत्र खोलेर ल्याउने सबै सामान अनुत्पादक हो भने मोटरमा मात्रै किन कर्जा रोक्ने त ? हामी अर्बाैं रुपैयाँको दाँत माझ्ने मन्जन र सुगन्धवाला पफ्र्युम आयात गर्छौं । त्यो सबै अनुत्पादक हुन् नि । त्यसले उत्पादनलाई के सहयोग गरेको छ त ? त्यसो हो भने यो सबै बन्द गरिदिउँ । होइन भने उत्पादनमूलक भनेको के हो र के होइन भनेर छलफल गर्न आवश्यक छ । बजेट कहिले आउँछ भन्दा पनि बजेट कार्यान्वयनमा कसरी जान्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । गत वर्ष संविधान बनेपछि निकै ठूलो आकारको बजेट आयो । समयमै बजेट आएको र आकार पनि ठूलो भएकाले निजी क्षेत्र अत्यन्त उत्साहित भयो । त्यो सँगसँगै हामीले सुरुको ६ महिना मज्जाले काम ग¥यौँ । सरकारको राजस्व असुली लक्ष्य प्राप्त भयो भन्ने सुनियो । यसमा बुझ्नुपर्ने के छ भने सरकारको राजस्व बढेको भनेको सरकारले काम गरेको होइन, निजी क्षेत्रले काम गरेको हो । निजी क्षेत्रले काम बढी ग¥यो, त्यसपछि कर तिर्‍यो । निजी क्षेत्रले जति काम गर्छ भन्ने अनुमान थियो, त्योभन्दा बढी काम भएकाले राजस्व बढी आयो । सरकारले काम गर्ने भनेको प्राप्त राजस्वलाई खर्च गर्ने हो ।
सरकारको राजस्व बढेको भनेको सरकारले काम गरेको होइन, निजी क्षेत्रले काम गरेको हो । सरकारले काम गर्ने भनेको प्राप्त राजस्वलाई खर्च गर्ने हो ।
पञ्चायतकाल अन्त्य भएको २८ वर्ष भएछ । यो बीचमा नेपालमा कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नै अर्थमन्त्रीहरूले काम गरे । योजना आयोगको नेतृत्व पनि उनीहरूको हातमा रह्यो । अब यी ठूला दल र नेता तथा नीति निर्माताले गएको २८ वर्षमा किन बजेटको कार्यान्वयन हुन सकेन भनेर हेर्नुपर्‍यो । खरिद नीतिमा समस्या छ भने त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्‍यो । बाधा अड्चनको गाँठो फुकाउनुपर्‍यो । पुराना गाँठा नफुकाउने हो भने जति ठूलो बजेट आए पनि २८ वर्षसम्म चलेको रीतिथिति २९औँ वर्षमा पनि कायम रहनेभन्दा बढी केही हुँदैन ।
मुलुकमा ७ वटा प्रान्त छन् । त्यसमा ७ जना मुख्यमन्त्री हुन्छन् । ७ वटा मन्त्रिपरिषद् हुन्छ । ७ वटा प्रान्तीय सरकार र साढे ७ सय स्थानीय सरकारलाई धान्ने स्रोत कहाँबाट ल्याउने भन्ने चिन्ताको विषय छ । त्यस्ता सरकारहरू धान्न हरेक ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने, करको दर बढाउने वा करको पुनरसंरचना कसरी गर्ने भन्ने कुरामा वित्तीय क्षेत्रसँगै पूरा निजी क्षेत्रको चासोको विषय हो । एकठाउँमा उत्पादित वस्तु अर्को प्रान्तमा लगेर बेच्नुपर्‍यो भने कहाँ–कहाँ कर तिर्ने भन्ने कुराले लगानीको वातावरणलाई प्रभावित बनाउन सक्छ । बजेट कहिले आउँछ र कत्रो आउँछ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण होइन । बजेटको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बजेटको सफल कार्यान्वयन हुने हो भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ । बजेट आउनलाई नै गाह्रो भएको अवस्था छ । यो समस्या समाधान भएर भोलिका दिनमा राम्रो तवरले अघि बढ्छ भन्ने आशा गरौँ ।
बजेटमा नयाँ कार्यक्रम रोक्नु अनुचित
महासचिव, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
नेपाल अहिले जुन प्रकारको राजनीतिक मोडालिटीमा अगाडि बढेको छ, यसको विशेषता भनेकै अधिकतम दलहरू अस्तित्वमा रहनु हो । भोलि गएर कुनै पनि वेला बहुमतको सरकार नबन्ने अवस्था आउन सक्छ । जहिले पनि सहमतीय आधारमा सरकार बनाउनुपर्ने अवस्थामा छिटोछिटो सरकार परिवर्तन हुने र राजनीति अस्थिर रहने सम्भावना रहन्छ । त्यसकारण अब राजनीतिक दलहरूले आर्थिक समृद्धि र आर्थिक विकासका सन्दर्भलाई राजनीतिबाट बाहिर राख्नुपर्छ ।
हामीले नेपालका लागि महत्वपूर्ण दुईवटा आर्थिक लक्ष्य लिएका छौँ । सन् २०२२ सम्म अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकका रूपमा लैजाने र २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा पुर्‍याउने । तर, आजैबाट नया“ बजेटमा नया“ कार्यक्रम आउन नदिने, नया“ सुविधा ल्याउन नदिने र हरेक वर्ष राजनीति यही अवस्थामा रहने हो भने मुलुकले आर्थिक प्रगति कसरी गर्छ ? राजनीतिक दलहरूको यही अडान रहने हो भने भोलि हामी यी दुवै लक्ष्यमा पुग्न सक्दैनौँ । अर्कोतर्फ नेपालको कर्मचारीतन्त्र राजस्व उठाउने सन्दर्भमा शतप्रतिशत सफल छ । तर, खर्च गर्ने सन्दर्भमा कर्मचारीतन्त्र असफल छ । त्यसकारण सबै दल मिलेर अब कर्मचारीतन्त्रको मोडालिटी र काम गर्ने तौर–तरिका परिवर्तन गर्नतिर लाग्नु उचित हुन्छ । विदेशमा सही स्थानमा सही मानिसले स्थान पाएको हुन्छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारी नियुक्त तथा सरुवा–बढुवा हुने वातावरण हटाउनुपर्छ ।
उदाहरणका लागि आज अमेरिकामा ४–४ वर्षमा राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ, त्यसवेला राष्ट्रपतिले आफ्नो लागि चाहिने मुख्य–मुख्य कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्छन् । नेपालमा पनि पा“च वर्ष स्थायी सरकार रहने अवस्था भए एकपटक नियुक्त हुने कर्मचारीले सरकार रहने अवस्थासम्म काम गर्न सक्ने थिए । नत्र आजको दिनमा जसरी सरकार परिवर्तन भएको छ, यही अवस्थामा कर्मचारीतन्त्रमा पनि परिवर्तन गर्ने हो भने नेपाल कहिल्यै पनि आर्थिक समृद्धितर्फ अगाडि बढ्न सक्दैन । यसको मतलव नेपालले २७–२८ प्रतिशतभन्दा माथि विकास खर्च गर्नै सक्दैन ।
नयाँ बजेटमा नयाँ कार्यक्रम आउन नदिने, नयाँ सुविधा ल्याउन नदिने र हरेक वर्ष राजनीति यही अवस्थामा रहने हो भने मुलुकले आर्थिक प्रगति कसरी गर्छ ?
अर्कोतर्फ नेपालको कर्मचारी एकातर्फ निर्णय र अर्कोतर्फ काम गर्न पनि डराइरहेको छ । कहिले अख्तियारको डर त कहिले अनियमितताको आरोपले उनीहरू काम गर्न हिच्किचाउँछन् । तर, जब खर्च नै नगरी बसे भने उनीहरूमाथि लाग्ने एउटा मात्र आरोप खर्च गर्न सकेनन् भन्ने हो । त्यसपछि उम्किन्छन् । यस्तो अवस्थामा हामीले राखेका आर्थिक समृद्धिका लक्ष्य कसरी हासिल गर्छौं भनेर राजनीतिक दललाई प्रश्न गर्ने वेला आएको छ ।